बजारमा पाइने प्रशोधित पानी, दूध र दहीमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म - ज्ञानविज्ञान
कोलिफर्म के हो ?
कोलिफर्म बाहिरी वातावरणमा रहेको पानी, मानिस वा तातो रगत भएका जनावरका दिसामा पाइने गर्छ। यो एक दर्जनभन्दा बढी ब्याक्टेरियाको समूह हो। यदि कुनै पानीमा कोलिफर्म भेटिए, त्यसमा ढलको पानी मिसिएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर, यसमा हुने धेरैजसो ब्याक्टेरियाले मानव स्वास्थमा उल्लेख्य हानी पुर्‍याउँदैन।
उद्योगहरूले उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न पठाएको प्रशोधित पानी, दूध र दहीमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म भेटिएको छ ।
विभिन्न उद्योगका घिउ र तेल पनि गुणस्तरहीन भेटिएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको अनुगमन र परीक्षणमा पानीमा कोलिफर्म र ई. कोली भेटिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा खराब पानी उत्पादन गर्ने २२ सहित दूध, दही, तेल र घिउ गरी १३५ उद्योगविरुद्ध विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाएको छ । ई. कोली मानिस तथा जनावरको तथा कोलिफर्म मानिसको दिसामा पाइने जीवाणु हुन् । यस्ता जीवाणुयुक्त पानी सेवन गरे झाडापखालालगायत गम्भीर रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
गुणस्तरहीन घिउ र तेल
बजारमा बिक्रीका राखिएका कैयौँ कम्पनीबाट उत्पादित घिउ र तेल पनि गुणस्तरीय नभएको विभागले जनायो । परीक्षण गर्दा घिउ र तेल नै न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागका प्रवक्ता वस्तीले बताए । उनले विभिन्न कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको पनि जानकारी दिए ।
बजार निरीक्षकहरूले बजारबाट संकलन गरेको पानी, दूध, तेल र घिउको नमुना विभागको आफ्नै प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए ।
कमजोर सजायले सुध्रिएनन् व्यापारी
विभागले न्यून गुणस्तर र दूषित उत्पादन गरेको दुई शीर्षकमा मुद्दा चलाउँछ । विभागले न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगविरुद्व पाँच हजार रुपैयाँसम्म र दूषित खाद्यवस्तु बेच्ने उद्योगविरुद्व १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।
तर, यस्ता कम्पनी नै बन्द गर्ने वा कसैलाई जेल हाल्ने काम विभागले गर्न सक्दैन । विभागले अनुगमन गर्ने, परीक्षण गर्ने, सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फैसला गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ ।
अनुगमनदेखि कारबाही फैसलासम्म विभिन्न निकायको जिम्मेवारी हुने र सजाय पनि कमजोर भएकाले व्यापारीहरूले पटक–पटक बदमासी दोहो-याउने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
परीक्षण गर्दा दूध, दही र पानीमा कोलिफर्म भेटियो । घिउ र तेल पनि न्यून गुणस्तरको पाइयो । उद्योग रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौँ ।
गुणस्तरहीन घिउ र तेल बेच्ने उद्योगहरु
विभागले मुद्दा दर्ता गराएको घिउ र तेल कम्पनीहरूमा स्वस्तिक आयल इन्डिस्ट्रिज, श्रीराम घिउ प्याकेजिङ उद्योग, आरती भेजिटेबल प्रोडक्स प्रालि, एग्रो प्रोसेसिङ एन्ड इन्ड प्रालि (६ वटा मुद्दा) चन्द्रेश्वर किराना पसल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रौनक आधुनिक तेल उद्योग, सिद्धार्थ रिफाइनरी एन्ड सोल्भेन्ट इन्डस्ट्रिज, दुर्गा मोडर्न आयल मिल, सुजल डेरी प्रालि, प्रोबायोटिक इन्डस्ट्रिज प्रालि, दिव्य डेरी उद्योग, गणपति वनस्पति प्रालि (तीन मुद्दा), बाबा भेजिटेबल आयल इन्डस्ट्रिज, बागमती आयल इन्डस्ट्रिज, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्स प्रालि, नन्दन घिउ एन्ड आयल इन्ड, गणपति वनस्पतिलगायत छन् ।
खराब दूध, दही उत्पादन गर्ने उद्योगहरु
हेटौँडा डेरी इन्डस्ट्रिज प्रालि, संयुक्त डेरी एन्ड फुड प्रालि, सिर्जना सहकारी संस्था लि., नारायणी मिल्क एन्ड प्रालि, चन्द्रागिरि डेरी प्रालि, सुजल डेरी प्रालि र सञ्जिवनी डेरी प्रालि कोलिफर्मयुक्त उत्पादन बजारमा पु-याउने कम्पनी हुन् । यीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जीवाणुयुक्त पानी बेच्ने उद्योगहरु
विभागले मुद्दा दर्ता गराएका प्रशोधित पानी उद्योगहरूमा जलप्योर ड्रिंकिङ वाटर प्रालि, नेचुरल स्प्रिङ वाटर, स्तुपा इन्डस्ट्रिज, प्रसिद्ध वाटर इन्डस्ट्रिज, जिएस वाटर उद्योग, पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योग(दुई मुद्दा), नेचुरल ड्रिंकिङ वाटर, स्प्रिङ मिनरल वाटर अफ मातातीर्थ, यती वेभरेज प्रालि, काँक्रे बिहार वाटर एन्ड फुड, मध्यपश्चिम वाटर एन्ड वेभरेज प्रालि, देउती दर्शन वाटर एन्ड वेभरेज प्रालि, रारा ड्रिंकिङ वाटर, जय हनुमान ड्रिंकिङ वाटर, ग्लासियर फुड एन्ड वेभरेज इन्डस्ट्रिज, हिमालयन वेभरेज, पशुपति स्प्रिङ वाटर उद्योग, बालाली वेभरेज, सिन्धुली ड्रिंकिङ वाटर प्रालि, शुभ वेभरेज इन्डस्ट्रिज प्रालि र अमर पानी प्रशोधन उद्योग छन् ।
Don't Miss it राम्रो र भख्खरको देखिन कसलाई मान छैनर ! पढ्नुहोस बढ्दाे उमेर (anti-aging) प्रक्रिया बाट टाडा हुने प्राकृतिक उपायहरू
Up Next वास्तुशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले हरेक साँझ सम्झिनै पर्ने कुराहरु, जसले ल्याउँछ घरमा सुख र समृदि